I-China 7in 1 USB3.0 Type-C3.0 to HDMI USB3.0 Type-C SD/TF Docking station yabakhiqizi nabahlinzeki be-Surface Pro 7 |Wellink
7in 1 USB3.0 Type-C3.0 to HDMI USB3.0 Type-C SD/TF Docking station yeSurface Pro 7
• Uzalelwe i-Surface pro 7: I-Surface Pro 7 usb c hub ihlanganisa izimbobo ezingu-6, 4K@ 30Hz HDMI Imbobo, Imbobo ye-USB- C ( Kuphela Ukudluliswa Kwedatha), i-USB 3.0 ekabili, i-SD&TF/Micro SD Card Reader).Qaphela: Ihambisana ne-Microsoft Surface Pro 7 kuphela. Ayihambisani ne-Surface Go/Surface Pro 3, 4, 5, 6, Surface Pro X. Idokhi elingaphezulu le-Pro 7 ngeke lilingane nendawo yakho uma kunekesi lokuvikela likuyo.
• I-Hi-Res 4K HDMI: Isiteshi sokudokha esingaphezulu i-usb c ukuya embobeni ye-hdmi, isekela ukulungiswa kwevidiyo kufika ku-4K@ 30Hz futhi ibonise ngokukhululekile isibonisi sekhompuyutha ephathekayo yakho ephathekayo enesinqumo esiphezulu kuma-HDTV amaningi, imonitha noma iprojektha enembobo ye-HDMI, ikulethela kangcono. isipiliyoni sokubuka.
• I-Super Fast Data Transfer: Idokhi ye-Surface Pro 7 Adapter inikeza isivinini esingu-5Gbps kumachweba amabili e-USB 3.0, dlulisa ngokushesha, konga isikhathi sakho esiningi futhi ujabulele ukudluliswa kwedatha ngemizuzwana.Yabelana ngesikhathi esibalulekile ngaso leso sikhathi.Le hub ye-usb isebenza ne-U disk, igundane, ikhibhodi namanye amadivaysi e-USB.
• Ukuvumelana Okubanzi: Imbobo yohlobo C (Ukudlulisa idatha kuphela, akusekeli ukushajwa kwamandla) Isekela ukufunda ikhadi le-TF nekhadi le-SD ngesikhathi esisodwa.Ihambisana ne-SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMC, TF, Micro SDXC, Micro SD, Micro SDHC, Mini SD, UHS-I amakhadi afika ku-512GB.
• Iyaphatheka futhi Ihlangene: Ukubuka kwe-aluminium ecwebezelayo yesikhala kanye namaphethelo amnyama ane-beveled kufanelana kahle nezinsiza zakho ze-Surface Pro 7.Isisindo esilula silungele uhambo noma uhambo lwebhizinisi.Ukusekela Windows 10, 8, 7, XP system.Vele uxhume futhi udlale, akekho umshayeli odingekayo, thuthukisa ukusebenza kahle kwakho.
Q: Kungani ihabhu le-USB- C lingabonakali?
A: Sicela uqale kabusha idivayisi bese uxhuma ihabhu futhi.
Q: Kungani i-HDMI ingasebenzi ngenkathi ngixhuma ihabhu?
A: Okokuqala sicela uqinisekise yonke ikhebula kuhlanganise
Ikhebula le-HDMI, ikhebula le-USB-C lixhumeke kahle.
Okwesibili, sicela uhlole okuthi "Display Setting" ivuliwe.
I-Surface Pro 7, hlola ukuthi itholwe kahle,qapha(kufanele ibonise imodeli ye-TV/Monitor No.),ku-Surface Pro 7.
Okwesithathu, sicela ubheke ukutholwa kwevidiyo,I-TV/Monitor ilungile noma cha ngetheku Yikuphiikhebula le-HDMI lalixhunywe (njenge-HDMI1/ HDMI2/computer).
Uma isinyathelo 1, 2, 3 silungile, kodwa zisekhona,asikho isithombe kumonitha, mhlawumbe ihabhu le-SC01 likhona.
Q: Imbobo yohlobo C esetshenziselwa ini?
A: Ukudluliswa kwedatha kuphela, akusekeli ukushaja kwamandla.
Q:Ingabe iyahambisana namadivayisi angu-2.0?
A:uqinisekile, isiteshi se-doking siyahambisana nembobo eyodwa ye-usb 2.0 kanye nezimbobo ezimbili ze-usb 3.0.
Q:Ingabe idatha yosekelo lwembobo ye-usb c iyadlula?
A:Umthengi othandekayo, imbobo ye-usb 3.0 isekela ukudluliswa kwedatha engu-5Gbps ngemizuzwana.
Q:Ingabe uhlobo lwehabhu c lusekela ukushaja kwe-surface pro 7?
A: Sawubona, ihabhu le-usb uhlobo c lokuthutha idatha yembobo kuphela, ayisekeli ukushaja.Ngicela unake iphuzu.
Okwedlule: 6 ku-1 USB3.0+ mini DP kuya ku-HDMI+USB3.0 + SD/ TF Docking esiteshini se-Surface Pro 4
Olandelayo: 7in 1 USB3.0 Type-C3.0 to HDMI Type-C SD/TF Docking station for Surface Pro 7